Hay,ado Samafal oo Maanta gargaar ka bixiyay magaalada Beledweyne (Dhegayso) – Radio Daljir
Beledweyne Oct 11-Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo dhoowaan ay ka dhacday Fatahaad uu sameeyey webiga Shabelle ee mara dhawr gobol oo kamid ah Soomaaliya ayaa maanta gargaar la gaarsiiyey qaar kamid ah dadkii Waxyeeladu kasoo gaadhey Daadadkii webigu sameeyey.
Gudoomiye kuxigeenka gobolka Hiiraan Md Axmed Cismaan Inji oo maanta u Waramay Radio Daljir ayaa sheegay in uu jiro gargaar laga qaybiyey magaalada balse uusan ka warqabin maamulka gobolka Hiiraan.
Axmed Cismaan Inji kuxigeenka Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqay hay’adaha Samafal ka ah inay deeqaha ay bixinayaan soo mariyaan maamulka gobolka Hiiraan.
Sidoo kale gudoomiye kuxigeenku wuxuu sheegay inaysan jirin wax jawaab ah oo ay ka bixisay Fatahaada Webiga Hay’ada Cunada aduunka ee WFP, Wuxuuna sheegay inay jiraan kormeero iyo Qiimayn ay sameeyeen Masuuliyiin hay’da ka socodey oo dhoowaan gaarey Beledweyne.
Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo maanta lagu wareejiyey daawooyin